Xinhua Myanmar - တရုတ်နိုင်ငံက WJ-700 မောင်းသူမဲ့လေယာဉ် ပွဲဦးထွက်ပျံသန်း
တရုတ် မောင်းသူမဲ့လေယာဉ် ပွဲဦးထွက်ပျံသန်းမှု
တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ပိုင်းရှိ လေဆိပ်တစ်ခုတွင် WJ-700 မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ကို တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ- China Aerospace Science and Industry Corporation) Science & Technology
တရုတ်နိုင်ငံ လေကြောင်းအာကာသ သိပ္ပံနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်း ကော်ပိုရေးရှင်းအောက်ရှိ အဖွဲ့အစည်းက ထုတ်လုပ်သော WJ-700 လေယာဉ်သည် အဆင့်မြင့်နည်းပညာများစွာကို ထည့်သွင်းတည်ဆောက်ထားသည်။ ၎င်းလေယာဉ်၏ လုပ်နိုင်စွမ်း၊ အကွာအဝေးနှင့် သယ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကဲ့သို့သော အဓိကအညွှန်းများသည် မြင့်မားသောအဆင့်သို့ ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။
အဆိုပါ UAV လေယာဉ်သည် လာမည့် ငါးနှစ်မှ ၁၀ နှစ်အတွင်း ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပဈေးကွက် နှစ်ခုလုံးအတွက် ရည်ရွယ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကုမ္ပဏီက ဆိုသည်။
၎င်းလေယာဉ်၏ အောင်မြင်သော ပွဲဦးထွက်ပျံသန်းမှုသည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ မောင်းသူမဲ့စက်ကိရိယာ တီထွင်ဆန်းသစ်မှုနှင့် တိုးတက်မှုအတွက် အရေးပါသော ပံ့ပိုးမှု ထောက်ပံ့ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ကုမ္ပဏီ သတင်းရင်းမြစ်များက ပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
Source: Xinhua| 2021-01-13 22:57:35|Editor: huaxia
The success of the maiden flight will provide important support for the innovation and development of China's unmanned equipment, sources with the company said. ■
Photo taken on Jan. 11, 2021 showsaWJ-700 UAV at an airport in northeast China. (Photo provided by China Aerospace Science and Industry Corporation)
Previous Article တရုတ်နိုင်ငံက မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေးဂြိုဟ်တုအသစ်တစ်စင်း လွှတ်တင်
Next Article ရာသီဥတုမွမ်းမံမှုဆိုင်ရာ မောင်းသူမဲ့ဒရုန်းလေယာဉ် “Ganlin-1”၏ ပထမအကြိမ် စမ်းသပ်ပျံသန်းမှု အောင်မြင်